IXiaomi Mi CC9 kunye neCC9e ziya kuboniswa ngoJulayi 2 | I-Androidsis
IXiaomi Mi CC9 kunye neCC9e sele zinomhla wokubonisa
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo Uluhlu lweefowuni zeCC lubhengezwe ngokusesikweni, Wazalwa ngentsebenziswano phakathi kukaXiaomi noMeitu. Uluhlu olusishiyileyo kwiintsuku ezimbalwa emva koko kunye nevidiyo yalo yokuqala yokwazisa, apho unokufumana khona bona enye yeefowuni. Ngoku, iifowuni ezimbini zokuqala ezikoluhlu, IXiaomi Mi CC9 kunye neCC9e sele zinomhla wokubonisa.
Ngekhe silinde ixesha elide ukuze sazi olu luhlu ngokusemthethweni. Kuba sinokulindela ukuba ezi Xiaomi Mi CC9 kunye neCC9e ziya kuziswa ngokusesikweni kwiveki ezayo. Ke ngeveki olu luhlu lutsha lophawu lwaseTshayina ekugqibeleni luya kuba semthethweni.
Ngomhla wesi-2 kuJulayi ngumhla okhethwe ngawo lo mboniso yeXiaomi Mi CC9 kunye neCC9e. Iya kuba ngumnyhadala owenzeka ngentsimbi yesi-19 emva kwemini eBeijing, ozakubayi-00: 13 emva kwemini eSpain. Kule meko, olu luhlu lutsha lophawu lwesiTshayina lwenziwe ngokusemthethweni, ngokungathandabuzekiyo oludala umdla kwezi ntsuku, ngenxa yokuvuza okuthe kwafika.
Olu luhlu lweCC lusungulwa ngokukodwa kubaphulaphuli abancinci. Uphawu lwesiTshayina lukucacisile oku kwiminyhadala yokuqala yokwazisa. Ke ngoko, sinokuba nethemba lokuba iikhamera yenye yezona zinto zinamandla kwezi fowuni. Nangona okwangoku kungekho zinkcukacha ngazo.
Ngelixa enye yeemodeli ezimbini, iMi CC9e, kulindeleke ukuba Ndafika ndinekhamera ejikelezayo. Sele kukho ukuvuza kule meko, kodwa kubonakala ngathi kuyaqinisekiswa ukuba iyakuba yile fowuni inayo. Ke olu luhlu lweXiaomi Mi CC9 kunye neCC9e luza noyilo oluhlaziyiweyo, kwenye yeemodeli. Enye iya kuba nenotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi.
Ngokuqinisekileyo kwezi ntsuku siya kuba nokuvuza okuninzi malunga noku. Kodwa akuyi kufuneka silinde ixesha elide de ezi Xiaomi Mi CC9 kunye neCC9e zenziwe ngokusemthethweni. Nge-2 kaJulayi siza kuyazi yonke into ngolu luhlu lutsha Uhlobo lwesiTshayina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi CC9 kunye neCC9e sele zinomhla wokubonisa
Yocingo 5.8: Indawo izingxoxo okanye ukongeza abantu abasondeleyo kuwe phakathi kwezinye iindaba
UHarry Potter: I-Wizards Unite ivelise i-300.000 yeedola kusuku lwayo lokuqala